ICT for Myanmar: November 2010
ဒီ Server က Microsoft က တီထွင်ခဲ့တာပါ
သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာသင်ခန်းတွေ နဲ့ Labs,Libraries တွေမှာ Increase access ရဖို့အတွက်ပါတဲ့။
သူ့ကိုယ် သုံးရင်... Multiple user တွေဟာ တူညီတဲ့ ကွန်ပျူတာ တလုံးမှာပဲ ကိုယ်ပိုင် Monitor, Mouse , Keyboard တွေ ကိုယ်စီနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒီတော့ဗျာ... Labs, Libraries တွေနဲ့ စာသင်ခန်းတွေမှာ user တယောက်ချင်းစီအတွက် စက်တစ်လုံး စီ စီစဉ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Multipoint Server တလုံးရယ်... Keyboard,Mouse, Monitor တွေရယ် ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုသက်သာတာပေါ့။
Microsoft ကတော့ Multipoint Server Operating System တခုမှာ user (၁၀) ယောက်သုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Multipoint Server တလုံးကို သုံးရင် ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက...
၁။ User တိုင်း ကိုယ်ပိုင် Computing Experience ရနိုင်တယ်။
၂။ User တိုင်း ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် Setting တွေ လုပ်ထားနိုင်တယ်။
၃။ User Account တွေကို Manage လုပ်နိုင်တယ်။
၄။ User တွေရဲ့ Group တြွေကားမှာ Data Sharing ကို လွယ်ကူစွာ လုပ်နိုင်တယ်။
၅။ User တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Data တွေကို ကိုယ်ပိုင် Folder လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်တယ်။
၆။ Multimedia ပိုင်းတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာလဲ တခြား user တွေကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ - Video ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာပေါ့။
၇။ Server ပေါ်မှာ Application တခု တစ်ကြိမ် install လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့ user station တွေ အားလုံး သုံးလို့ရပါတယ်။
၈။ Disconnect Feature ဆိုတာကြောင့် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို Pause လုပ်ထားနိုင်တာကြောင့် Time Saving ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Station ဘယ်နှစ်ခု သုံးနေလဲ၊ ဘယ် user က ဘယ် system ကို သုံးနေလဲဆိုတာကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Multipoint Server ကို တပ်ဆင် အသုံးပြုပုံကို အပေါ်က ပုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် သိသာသွားပါလိမ့်မယ်။
Callback ဆိုတာ က Telecom Service Provider Company တခုရဲ့ Network က Authentication Server ကို Company Network အပြင်ကနေပြီးတော့ user က လှမ်း connect လုပ်တာပါပဲ။
သူ့ကို ဖုန်းဝန်ဆောင်ခ စျေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သုံးပါတယ်။
သူ့ အလုပ်လုပ်ပုံက ဒီလိုပါ...
Suscriber(ဖုန်းအသုံးပြုသူ) က နေ Service Provider ရဲ့ Authentication Server ကို PIN နံပါတ် တခု သုံးပြီး ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
( ၄င်း PIN နံပါတ်ကို Callback Service Provider များမှ ရောင်းချပေးသော Callback Card များမှ ရရှိပါတယ်။)
အဆက်အသွယ်ရပြီဆိုရင် Authentication Server က Callback System မှာ register လုပ်ထားတဲ့ PIN နံပါတ် ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးပါတယ်။ Valid user ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးတာပါ။
( ထိုကဲ့သို့ စစ်ဆေးနေချိန်မှာ user နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားမှု ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။)
Valid ဖြစ်တယ်။ မှန်တယ်ဆိုရင် User ကို call back ပြန်လုပ်ပါတယ်... User က Server နဲ့ ချိတ်ဆက်မိပြီဆိုတာနဲ့... ကိုယ် ခေါ်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ အားနည်းချက်ကတော့ ကိုယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းရဲ့ Caller ID description မှာ ကိုယ့် ဖုန်းနံပါတ် မပေါ်တာပါ။
Callback Service Provider က ချပေးတဲ့ နံပါတ်ပဲ ပေါ်ပါတယ်။
သူ့ ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဖုန်းဝန်ဆောင်ခ တော်တော်လေး သက်သာတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီ စနစ် ကျင့်သုံးတော့မယ်လို့ သတင်းတော့ ကြားမိလိုက်သလိုပဲ။
ခုတလော... D-DoS Attack ဆိုတာတွေ နားနဲ့ မဆံ့အောင် ကြားရလွန်းလို့...
D-DoS Attack အကြောင်း အနည်းအကျဉ်း ပြန်မျှဝေလိုပါတယ်...
D-DoS Attack ဆိုတာ Distributed Denial of Services Attack ပါတဲ့။
ကွန်ပျူတာ တွေ အများကြီးက နေ Server ဆီကို request တွေ တပြိုင်တည်း အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ပြီး Server ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ နှေးကွေးသွားအောင်...
နောက်ဆုံး Shutdown ချလိုက်ရတဲ့ အထိ လုပ်တာပါ။
သူက အချိန် အပိုင်းအခြားနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ စနစ်တခုလို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဘာလို့ Attack လုပ်ရတာလဲ...
ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ Attack လုပ်ရတာလဲ...
စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒီအချက်တွေကြောင့်လို့ အကြမ်းမျဉ်း တွေးမိတယ်...
1. Sub-cultural status ( Hacker အများစု ဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကို ဒီနည်းနဲ့ စတင်တတ်ကြတယ်)
2. To gain access ( တခါတလေမှာတော့ System တွေကို access လုပ်နိုင်ဖို့.. ဝင်ရောက်မွှေနှောက်နိုင်ဖို့ )
3. Revenge ( System တခုခု ကို အတူတူ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ User (or) Administrator တယောက်ယောက်က မကျေနပ်လို့ လက်စားပြန်ချေတာ )
4. Political reasons ( နိုင်ငံရေး အရ တိုက်ခိုက်တာ )
5. Economical reasons ( စီးပွားရေးအရ တိုက်ခိုက်တာ )
6. Nastiness ( လူညစ်ပတ်တွေ လက်တည့်စမ်းတာ )
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလောက်ပဲ တွေးမိတယ်ဗျာ။
ဒီအထဲကမှ အခုနောက်ပိုင်း နံပါတ် (၂) ကနေ (၅) အထိ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကို ပိုတွေ့လာရပါတယ်။
D-DoS Attack က Server ရဲ့ ဘယ်လိုအပိုင်းတွေကို တိုက်ခိုက်တာလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
(၁) Server ရဲ့ SWAP space ကို သူ့ရဲ့ Request တွေနဲ့တင် ပြည့်သွားအောင် လုပ်တယ်။
(SWAP space က client request များကို service ပေးဖို့အတွက်ပါ)
(၂) Bandwidth တွေကို အများကြီး ယူသုံးပစ်လိုက်တယ်။
(၃) Server ရဲ့ Kernel Memory Allocation Tables ကို Overflow ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
( Kernel မှာ Kernelmap limit ရှိပါတယ်။ သူ့ limit ကျော်သွားတာနဲ့ system reboot ဖြစ်တာပါပဲ။)
(၄) Server ရဲ့ RAM ကို ပြဿနာတက်အောင် လုပ်တယ်။
( NFS Server တို့ mail server တို့က RAM နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပါ။ သူ့ကို ပြဿနာရှာပြီဆိုတာနဲ့ User တွေ
(၅) Server ရဲ့ Hard Disks space ကို ပြည့်သွားအောင် လုပ်တယ်။
( Hard Disk Space သိပ်နည်းသွားရင် overload ဖြစ်ပြီပေါ့။)
(၆) Server ရဲ့ Caches ကို ပြဿနာရှာတယ်။
(၇) Server ရဲ့ running services တွေကိုလည်း အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်တယ်။
သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ ပုံစံက ဘယ်လိုလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
(၁) Attacker ဆိုတဲ့သူက ကိုယ် attack လုပ်ချင်တဲ့ Target ရဲ့ Security Management ပိုင်းအားနည်းတဲ့ Network Site ကိုရှာပါတယ်။
(၂) တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ အပေါ်က ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Illegal Program ကို install လုပ်ပါတယ်။
(၃) ပြီးပြီဆိုတာနဲ့... Program ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ Set up လုပ်ပါတယ်။
(၄) ကဲ... အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့... Server ကို လှမ်းပြီး Attack လုပ်ပြီပေါ့ဗျာ။
Denial of Service Attack တွေထဲမှာ..
- SYN Flood Attack
- Smurf စတာတွေ ပါပါတယ်။﻿
ကဲ... ဒီလောက်ဆို D-DoS Attack ဆိုတာကို အခြေခံအားဖြင့် သိလောက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော် အခု ပြောပြတာက အခြေခံပါ... နောက်တခု ဝန်ခံချင်တာက...ပြည့်စုံတဲ့ ရှင်းလင်းချက် တော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီထက် ပိုသိချင်ရင်တော့ Google ကိုသာ အားကိုးပေတော့ဗျို့
ပြည်တွင်း Blogger တို့အတွက် Phzilla: Add-ons for Firefox
ကဲ...လာပါပြီ mozilla firefox ရဲ့ add-on တခု..
နာမည်လေးကတော့ Phzilla တဲ့ဗျာ
ပြည်တွင်း ကနေ Blog တွေကို ကြည့်နေတဲ့သူတွေ...
Blogger တွေ ဝမ်းသာလိုက်တော့ဗျာ...
ဒီ add-ons လေး တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ...
ပိတ်ထားတာတွေ ကို ကျော်တာကတော့ လေးစားစရာကောင်းတယ်...
ဝမ်းသာပြီး မနေနိုင်လွန်းလို့ install လုပ်ပြီးတော့ တွေ့ရမယ့် ပုံလေးတွေနဲ့ သုံးတဲ့အခါ တွေ့ရမယ့် Screen shot လေးတွေတောင် တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။
ပထမဆုံးပုံက URL Address ရဲ့ ညာဘက်နားမှာ P ပုံ icon လေးပေါ်နေတဲ့ပုံ
ဒုတိယပုံက Browser ရဲ့ Status Bar ညာဘက် အောက်ထောင့်မှာ P ပုံ icon လေးပေါ်နေတဲ့ပုံ
တတိယပုံက ဒုတိယပုံရဲ့ icon ပေါ်မှာ Right click လုပ်ရင် ပေါ်လာတဲ့ပုံ
ဒီမှာ သာ သွားဖတ်ကြည့်တော့။
ဒီနေရာကို သွားပြီး အရင် Download လုပ်လိုက်ပါဗျာ။
မြန်မာပြည်သားများ အင်တာနက်ကို အတားအဆီး အပိတ်အပင်မရှိ သုံးနိုင်ပါစေဗျာ။
ကဲ..လာပြန်ပါပြီ နောက်တမျိုး... သူက တော့ secret key နဲ့ pubic key နှစ်မျိုးလုံးကို Encryption အတွက်ကော Decryption အတွက်ပါ သုံးပါတယ်။
Secret key ကတော့ personal သုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး third party ကို လုံးဝ share မလုပ်ပါဘူး။
Pulic key ကတော့ third party တွေကိုပါ pubish လုပ်ပြီးသုံးတာပါ။
Publish လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလဲ Certification authority organization တွေဆီမှာ register လုပ်ရပါတယ်။
Public key cryptography က RSA (Rivest, Shamir and Adleman) method ကို အသုံးပြုပါတယ်။
(RSA အကြောင်းကိုတော့ ဒီနေရာမှာ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။)
Public key cryptography ရဲ့ Framework က ဒီလိုပါ...
Recipient က secret key နဲ့ publick key ကို generate လုပ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ public key တွေကို list လုပ်ထားတဲ့ certification authority ဆီမှာ သူ့ရဲ့ public key ကို register လုပ်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ recipient က certificate ရပါပြီ။
Sender ဘက်က recipient ရဲ့ public key ကို certification authority ဆီက နေ ရယူပါတယ်။
Sender ကပဲ recipient ရဲ့ public key ကိုသုံးပြီး encrypted လုပ်ထားတဲ့ ciphertext ကို send လုပ်ပါတယ်။
Recipient က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် secret key ကို သုံးပြီး ciphertext ကို decrypt ပြန်လုပ်ပါတယ်။
Public key cryptography ရဲ့ Characteristics တွေက တော့
- recipient အများကြီးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ communicate လုပ်နိုင်မယ့် pubilc key ကိုသုံးတာပါ။
- key တွေကို manage လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
- ဒါပေမယ့် encryption and decryption လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ speed နှေးပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပုံလေးနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ။
Public key cryptography ကို
- Secure RPC
- Cisco encrypting router တွေမှာ သုံးပါတယ်တဲ့ဗျာ။
မကြာသေးခင်က ဖွင့်လှစ်လိုက်သော ရတနာပုံ Website သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် ည ၁၂ နာရီ ၂၃ မိနစ်ခန့်တွင် Hack လုပ်ခံလိုက်ရပါသည်။
"ညနေကမှပဲ ဖွင့်လို့ရသေးတယ်။ ဒီနေ့ည www.yatanarpon.com.mm ဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဖွင့်မရတော့ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ပေါ်လာတယ်" ဟု ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတစ်ဦးက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြောကြားသည်။
ရတနာပုံ Website ကို လူအင်အား၊ ငွေအင်အားများစွာသုံးကာ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ဖက်စပ် တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့အကြီးဆုံး Web Portal တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို Website စတင်ပေါ်ပေါက်လာကတည်းက ရတနာပုံ Web Server ကို အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ (၁၉) ရက်နေ့ တုန်းကလဲ ဝင်ကြည့်တော့ Access has been denied ဆိုပြီးပေါ်လာတာ ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်...
ခုတလော ဝင်ကြည့်လိုက်တိုင်း လိုအပ်တာထက် ပိုမိုလေးလံတာကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်...
ဒီတခါ Encryption & Decryption Process မှာသုံးတဲ့ Common Key Cryptography
Common key cryptography က encryption နဲ့ decryption လုပ်ငန်းစဉ်မှာ Same Key
အဲ့ဒီ Key ကို Sender နဲ့ Recipient က share လုပ်ပြီး သုံးပါတယ်။
ဒီတော့ Sender နဲ့ Recipient မဟုတ်တဲ့ တခြား third party က ဒီ Key တွေ
Common key cryptography ကို Secret key cryptography သို့မဟုတ် Shared key
Common key cryptography ဟာ Data Encryption Standard ကို
သူ့ရဲ့ Framework က ဒီလိုဗျာ...
ပထမဆုံး... Sender က common key ကို generate လုပ်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ recipient ဘက်ကို confidentially transmit လုပ်ပါတယ်။
နောက်တော့မှ Sender က Common Key နဲ့ encrypted လုပ်ထားတဲ့ Ciphertext ကို send
နောက်ဆုံးမှာ Recipient က Ciphertext ကို Common key ကို သုံးပြီး decrypt
သူ့ရဲ့ Characteristics တွေက တော့...
Encryption နှင့် Decryption speed မြန်ဆန်ခြင်း။
Common key အား transmit လုပ်ချိန်တွင် third party မှ ရယူသွားနိုင်ခြင်း။
Communicate လုပ်မည့် partner တခုစီအတွက် Separate common keys များ
အပေါ်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရင် ပိုနားလည်မှာပါ။﻿
ကျော်ဖို့ခွဖို့ Site လေး (၂) ခုတွေ့တာနဲ့ ပြန်မျှပေးလိုက်တယ်ဗျာ...
ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကို Google,Yahoo နဲ့ Bing Search Engines တွေမှာ ထည့်မယ်
ကိုယ့် Blog လေးကို သူများတွေ Search Engine ကနေရှာရင် တွေ့ဖို့ဆိုတာ
ကိုယ်က Search Engine တွေရဲ့ database မှာ သွားထည့်ပေးထားမှ ဖြစ်မှာပေါ့။
အောက်က Link လေးတွေမှာ သွားလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ...
တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျ...ကိုယ့်ရဲ့ Blog Site Map ကိုတော့ Google ကို Submit လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဗျ။
ဒီနေရာက က Post ကို ပြန်ရေးထားတာပါ။
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...
Open source Open source နဲ့ အသံတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်လည်း... Red Hat Linux ကို စမ်းသုံးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်...မဆိုးပါဘူး... တော်တော်လေး Stable ဖြစ်တယ်ဗျ...
ဒါပေမယ့်... အသုံးပြုရန် Software ရှားပါးခြင်း၊ Used to မဖြစ်ခြင်း၊ လက်ရှိ Window platform များနှင့်
လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေနေသေးခြင်း... စသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်းကို ရပ်တန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့... Windows OS တွေ သုံးလာရတာ ငြီးငွေး ရိုးအီလာတာရယ်...
ခုတလော... Windows သုံးရင်းနဲ့ စက်က မကြာခဏဆိုသလို Hang နေတတ်တာနဲ့ အရင်က Stable ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Linux OS ကိုပြောင်းသုံးဖို့ စတင် ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့ဗျာ...
ဒါနဲ့ပဲ... ရှာဖွေရေး ဆင်းကြည့်ပါတယ်...
သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ Unbuntu သုံးတာ တော်တော် ကောင်းကြောင်း ညွှန်းလာပါတယ်။
ကိုယ်လဲ သုံးကြည့်တာပေါ့ဆိုပြီး စမ်းပါတော့တယ်...
ူသူပြောသလို တကယ်လဲ သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ့်ပုံပဲဗျ... OS install လုပ်ရတာလဲ လွယ်ကူပါတယ်...
Graphic ပိုင်းတွေလဲ Window ထက်ကို သာလွန်ပါတယ်... နောက်ပြီး...interface တွေလည်း ကြိုက်ပါတယ်...
ပြဿနာ က ဒီလိုဗျ... OS installation ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ... Hardware device တွေအတွက် လိုတဲ့ update တွေ download လုပ်ဖို့... internet connection တောင်းတာပဲ... ဒီမှာ ကိုယ့် စက်ရဲ့ Network adapter ကို သူက မသိ...
ကဲ...ဘယ်လို လုပ်မလဲ... ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျာ...
ဒါနဲ့... နောက်စက်တလုံးနဲ့ စမ်းတင်ကြည့်တယ်...
အဲ...ကံကောင်းတယ်ဗျ...Network adapter ကို သိတယ်... ဒီတော့ Internet connection ရပြီပေါ့ဗျာ...
Browser ကိုဖွင့်လိုက်တယ်... blog ကို သွားတယ်... ဒီမှာ လာပါပြီ နောက်ထပ်ပြဿနာ... plug-in update လုပ်ခိုင်းပါတယ်...
လုပ်ကြည့်တယ်...မရဘူးဗျာ.... ဘာလိုတယ်...ဘာတော့မရှိဘူး... ဘာတော့ဖွင့်ပါ...ပြောတယ်ဗျ... ကိုယ်ပဲ ည့ံလို့လားမသိဘူးဗျာ...တခုမှ မသိဘူး...
ဒါနဲ့ပဲ... Browser လေး အသာပိတ်ပြီး... Media player ဖွင့်ကြည့်တယ်... MP3 file လေး Play ကြည့်တယ်... မရပြန်ပါဘူး...
ဒီမှာတင်ပဲ... နားလည်လိုက်ပါတယ်... ငါ ရှေ့ဆက်လို့ မဖြစ်ချေဘူးပေါ့...
ဒါနဲ့ ...ဖွင့်ထားတဲ့ Media player ကို ပိတ်တယ်...လားလားဗျာ...မောင်မင်းကြီးသားက လုံးဝ မလှုပ်တော့ဘူး...
ဘာမှ ကို Respond မလုပ်တော့ဘူး...ဘယ်ခလုပ်နှိပ်နှိပ်...Mouse နဲ့ ဘယ်နေရာ Click Click တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်တော့ပါဘူး...
Windows သာဆိုရင်တော့ ... လှုပ်လာအောင် စွမ်းနိုင်ကောင်း စွမ်းနိုင်မယ်ထင်တယ်...အခုတော့...
ဒါနဲ့... Power ခလုပ်ကို နှိပ်ကြည့်တယ်... Shutdown,Reboot,Sleep,Hibernate လေးခုပေါ်လာတယ်...တခုမကျန်လိုက် ရွေးကြည့်တယ်...ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...
ဒါနဲ့ပဲ...နောက်ဆုံးမှာတော့... Stable ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့... သူငယ်ချင်းလုပ်သူ အရမ်းညွှန်းတဲ့... Unbuntu လေးကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ Hard disk ပေါ်ကနေ မောင်းထုတ်လိုက်ရပါတော့တယ်ဗျာ...
မကျေနပ်သေးဘူး... Red Hat ကို ပြန်သုံးကြည့်အုံးမယ်ဗျာ...
လောလောဆယ်တော့ Windows လေးရဲ့ မျက်နှာကို မကြည့်ချင်ကြည့်ချင် ပြန်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့။
ခုတလော... မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်တွေ ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးဗျာ...
ရတနာပုံ တယ်လီပို့ဆိုလားပဲ... ဘာတွေလုပ်နေတယ်တော့မသိဘူး...
လားလား...ငချွတ်လေးတွေ... က Control လုပ်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေတာပါလား... (အခုတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ မလွှဲပေးလို့တဲ့)
အရင် ... ကိုယ်နဲ့သိတ့ဲ အကိုတွေ တယောက်မှ တယ်လီပို့မှာ မရှိတော့ဘူး...
အင်တာနက်ရဲ့ တကယ်အသုံးတည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Mediafire, 4shared ... အစရှိတဲ့ Download Site တွေ ကိုပိတ်ထားတယ်...
ဘာစိတ်ကူးတွေနဲ့ပါလိမ့်... သူတို့ကျတော့ အမှန်အကန်သုံးနေလိုက်ကြတာ...
ကိုယ်တွေမှာတော့... blog ကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဝင်မရ... post တင်မယ်ကြံတိုင်း ကျော်ခွရလွန်းလို့...
email ကနေ post တင်နိုင်အောင်လုပ်ရတယ်... ဒါကလည်း သိပ် မနိပ်ပါဘူးဗျာ...
သိတယ်မဟုတ်လား email နဲ့က Screen Shot လို ပုံလေးတွေကို တင်ချင်ရင် သူ့နေရာနဲ့ သူ့စာ ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးလေ...
ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်တော့လဲ ဒါလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရတယ်...
Youtube လည်း ပိတ်လိုပိတ်...
အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့ Skype ကိုလည်း ပိတ်...
Paypal site လည်းဝင်ရင် တော်တော်နဲ့ပေါ်မလာ...
ဒါတွေ ပိတ်ထားတာ ထားအုံးဗျာ... မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး နားလည်ပေးအုံးမယ
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်လေးတော့ မြန်မှပေါ့ဗျ..
ခုတော့ဗျာ... အလုပ်အတွက် အရေးကြီး အီ်းမေးလ်လေး ရောက်နေပါတယ်...
ဖွင့်ဖတ်လို့မရ... attachment file ကို Download ချဖို့ အိပ်မက်တောင်မမက်ရဲဘူး..
တော်တော် တော့ ပေါက် လာပြီ
Encryption ဆိုတာက Data တွေကို Secret Code တွေ အဖြစ်
Encryption ကို သုံးရင် ဘာဖြစ်လဲ... Data တွေ ပိုမိုလုံခြုံမှုရရှိစေတာပေါ့ဗျာ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Encrypted လုပ်ထားတဲ့ Data တွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်...
Decrypt ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ Key တွေရှိမှရမှာလေ။
Encrypt လုပ်ထားတဲ့ Data နဲ့ မလုပ်ထားတဲ့ Data ကိုဘယ်လိုတွေ ခေါ်လဲဆိုတော့
Encrypt မလုပ်ထားရင် Plain Text... လုပ်ထားရင် Cipher Text တဲ့...
Encryption လုပ်တဲ့ပုံစံကို ဥပမာပြပြီးပြောမယ်ဗျာ...
ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးရှိတယ်ဗျာ...သူတို့ နှစ်လုံးကို Network ချိတ်ထားတယ်ပေါ့
တလုံးက Sender နောက်တလုံးက Receiver ဆိုပါတော့
သူတို့ကြားမှာ Network တခု ခံနေတယ်ဗျာ... (ဥပမာနော်)
ဒါဆို Data ပို့ရင် ကြားထဲကနေ...ခိုးကြည့်တာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တာပေါ့...
ဒီတော့ ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် Data တွေကို Encryption လုပ်ပြီး
ဟုတ်ပြီ Encryption လုပ်ပြီးတော့ Data တွေကို ပို့လိုက်ပါပြီ ... လက်ခံတဲ့ဘက်မှာ...
Encryption လုပ်ထားတာကို ဒီအတိုင်းတော့ ဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲ... ပြန်ဖြည်ရသေးတာပေါ့
အဲ့လို ပြန်ဖြည်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့ Decryption လို့ခေါ်တယ်ဗျ
Encryption နဲ့ Decryption လုပ်ဖို့ Common Key (Secret Key/Shard Key)
ဒါမှမဟုတ်ရင် Public Key တွေတော့လိုတယ်ဗျ
ဒါက သုံးတဲ့အပေါ်လိုက်ပြီး ကွာခြားပါတယ်
Encryption Key နှင့် Decryption Key တွေ က Sender နဲ့ Receiver မှာ
ဒါပေမယ့်... သူတို့တွေက တခုနဲ့တခု အချိန်အဆက်လုပ်ထားပြီးသားပါ....
ကဲဒီလောက်ဆို Encryption နဲ့ Decryption အကြောင်း တီးခေါက်မိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ Encryption & Decryption Algorithm ကိုပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်။
ေဩာ်...တခုမေ့သွားတယ်... Encryption မှာ symmetric encryption နဲ့ asymmetric encryption ဆိုပြီး အဓိကအားဖြင့် (၂) မျိုးရှိတယ်တဲ့။
မှတ်ချက်။ ။ အခြေခံအဆင့်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင်
ရုံးတွေမှာ Data တွေ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ USB Storage Device, CDROM Drive နဲ့ FLOPPY Drive တွေကို System Administrator ကပိတ်ထားရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ဒီလိုပိတ်တဲ့အခါမှာ တချို့က Group Policy ကိုသုံးပြီးပိတ်တယ်၊ တချို့က Third-Party Software တွေကို သုံးပြီးပိတ်တယ်၊ တချို့က Registry မှာ သွားပိတ်တယ်။
အားသန်ရာ သန်ရာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က တော့ အောက်က နည်းလေးကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျ။
* HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_USBSTOR (For USB Storage Device)
* HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_CDROM (For CDROM Drive)
* HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_FLOPPY (For FLOPPY Drive)
ပြီးရင် Folder တခုချင်းစီပေါ်မှာ Right Click>Permission လုပ်ဗျာ။
ဒါဆိုရင် Permission for USBSTOR ဆိုတဲ့ Window တခုပေါ်လာမယ်ဗျ...
(Device တခုစီအတွက် Folder တခုစီမှာ လုပ်ရမှာပါ)
Security Tab မှာ Group or user names အောက်က
- Domain Users (Domain တပ်ထားမှ ပေါ်ပါတယ်)
တွေကို Full Control မပေးတော့ပဲ Deny ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ...
ပြီးရင်တော့ Apply > OK ပေါ့
ကဲ... ဒါဆိုရင် Removable device တွေ ကွန်ပျူတာမှ လာတပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ...
ဒါပေမယ့် တခုတော့ရှိတယ်နော်... Client Computer တွေအကုန်လုံးကို တော့ လိုက်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒါလေးကိုပဲ notepad နဲ့ CMD Script ရေးပြီး Start up မှာ Run အောင် ရေးထားချင်ရင်လည်းရပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁) နှစ်ကျော်က Phone Billing System အတွက် လေ့လာရတော့ RADIUS Server ဆိုတာ ပါလာတယ်...
ဒါပေမယ့်...တချို့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်သိထားတဲ့နည်းနည်းဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်တာနဲ့ ပြောပြလိုက်တယ်ဗျာ...
RADIUS Server ဆိုတာကတော့ Remote Authentication Dial In User Service လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
သူက Centralized Authentication တွေ၊ Authorization တွေနဲ့ Accounting
(AAA) Management တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ဗျာ... Centralized Management အတွက် အသုံးပြုတယ်ပေါ့။
သူ့ကို Internet Service Provider တွေ၊ Enterprise Level ရှိတဲ့ Network တွေ၊ Wireless Network တွေ နဲ့ Integrated email service တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Control လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်။
အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ Network တွေက Modems, DSL, Access Points, VPN, Network Ports နဲ့ Web Server တွေကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဗျ။
ပြောချင်တာကတော့ဗျာ RADIUS Server ကို VPN, Dial-Up (Modem), Wireless (Access Point) အစရှိတဲ့ Network တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုတယ်ပေါ့။
အဲဒီ Network တွေဟာ RADIUS Server ကနေတဆင့် Active Directory (AD) ထဲမှာရှိတဲ့ User Database တွေကိုယူပြီး အသုံးပြုရပါတယ်။
ဒါကြောင့် RADIUS Server ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Active Directory Infrastructure Network ရှိရမယ်ပေါ့ဗျာ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ RADIUS Server က Active Directory ရဲ့ Database နဲ့ တွဲဖက်အလုပ်လုပ်လို့ပါ။
ဒီတော့ VPN Client, Dial-Up Client တွေနဲ့ Wireless Client တွေ RADIUS Server ရဲ့ လက်အောက်မှာပဲ ဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။
RADIUS က Client/Server Protocol တခုဖြစ်ပါတယ်။ Application Layer မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို.. Dial-Up အတွက် Remote Access Server, VPN Server, Network Switch (with port-based authentication) တွေအပါအဝင် Network Access Server တွေအားလုံးရဲ့
Network Gateway ဟာ RADIUS Server နဲ့ Connected လုပ်ထားတာပါ။
RADIUS Server ကနေ ဘယ်အချိန်တွေ connect ပေးလုပ်မယ် မလုပ်ဘူး...ဘယ် Communication ကိုတော့ ခွင့်ပြုမယ် ဘယ် Communication ကိုတော့ ခွင့်မပြုဘူး... စသဖြင့် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့
Authentication တွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
RADIUS Protocol ကို အသုံးပြုတဲ့ OS Platform တွေကတော့
2. GNU RADIUS
3. Cistron RADIUS
4. Radiator RADIUS
5. Microsoft IAS
6. Advanced RADIUS တို့ဖြစ်ပါတယ်။
RADIUS Protocol ကို အသုံးပြုတဲ့ Client တွေဘက်မှာကတော့ Network Access Server (NAS) လို့ခေါ်တဲ့ Connection အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ။
NAS ဆိုတာက User တွေရဲ့ Connection တွေကို တိုက်ရိုက်လက်ခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့... Wireless Access Point ဟာ Wireless User တွေရဲ့ Connection ကို တိုက်ရိုက်လက်ခံပေးရတာမျိုးပေါ့။
Dial-Up Network တွေမှာဆိုရင်လည်း Modem တွေက Dial-Up Service ကို ထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ Dial-Up User တွေရဲ့ Connection တွေကို လက်ခံပေးရတာမျိုးပေါ့။
ဒီတော့ NAS ဆိုတာ Wireless Access Point တို့၊ Modem တို့လို ဟာ ကိုပြောတာပါ။
RADIUS မှာ Officially အရ UDP Port တွေကို သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဗျ။
RADIUS Authentication အတွက် Port နံပါတ် 1812 နဲ့
RADIUS Accounting အတွက် Port နံပါတ် 1813 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
RADIUS Protocol က NAS နဲ့ RADIUS Server ကြားမှာ Password တွေကို ပို့တဲ့အခါ Cleartext နဲ့ မပို့ပေးပါဘူး။
Pre-Shared Key တွေကို သုံးပြီး Encrypt လုပ်ပြီးမှ ပို့ပေးပါတယ်။
ဘာလို့ Pre-Shared Key ကို သုံးတာလဲ မေးရင် RADIUS Server နဲ့ RADIUS Client ကြားမှာ လုံခြုံမှုရှိစေရန်လို့ ပြောရမှာပဲ။
ကဲ... ဒီလောက်ဆို RADIUS Server အကြောင်း တီးမိခေါက်မိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
Encryption အကြောင်း အချိန်ရရင် ရေးပေးပါအုံးမယ်။
Telecommunication & Data communication Field ထဲကို စဝင်ချိန်မှာ ပဲ AAA ဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
ဘာလဲပေါ့ AAA ဆိုတာ။
3. Accounting တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ...တကယ်တော့ AAA ဆိုတာက Network management Framework တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Large Network တွေမှာလည်း တည်ဆောက်အသုံးပြုပါတယ်။
Cisco Router များမှာ ဒီ Framework ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အခြားသော Router များ မှာလည်း ၄င်း Framework ကို အသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး Network Management Server တြွေဖစ်တဲ့ RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Server နဲ့ TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) Serverတွေကလည်း ၄င်း AAA Framework ကိုအသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ AAA ဆိုတာဟာ Network ကို Management လုပ်တဲ့အချိန်မှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ သုံးတဲ့ Framework တခုပေါ့ဗျာ။
Authentication က သင့်ရဲ့ Network မှာရှိတဲ့ User တွေကို Network Resoureces တွေယူသုံးချင်ပါက ၄င်း User တွေရဲ့ User Name နှင့် Password ကိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်။တကယ်လို့ Authenticated Username နှင့် Password တူညီရင် Network ရဲ့ Resources များကို ယူသုံးခွင့်ပေးပြီး မတူခဲ့ရင်တော့ Access Deny လုပ်မှာပေါ့ဗျာ။
Authorization ဆိုတာကတော့ Network User တွေကို၊ သင့်ရဲ့ Network အတွင်း၌ မည်သည့် Resources များကို ပေးသုံးခွင့်ပြုသလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တာပါဗျာ။
Accounting ကတော့ Network အတွင်းမှာ ရှိကြတဲ့ User တွေက မည့်သည့် Network Resources များကို အသုံးပြုနေသလဲဆိုတာ ကို စစ်ဆေးတာပါဗျာ။
AAA ဟာ Network Management Framework ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို RADIUS Server နှင့် TACACS Server တို့နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Cisco Router တွေ နဲ့ Switch တွေမှာလည်း AAA Framework ကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။﻿
နာမည်လေးက... ForceTLS တဲ့ဗျ... ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့... http://www.facebook.com အစား https://www.facebook.com ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာ...
ဘာလို့ http ကနေ https ကို ပြောင်းသုံးတာလဲဆိုတော့ ပိုလုံခြုံလို့ပေါ့ဗျာ...
ဒါဆို http က မလုံခြုံဘူးလားဆိုတော့ မလုံခြုံဘူးပဲပြောရမှာပဲ...
ဘယ်လို မလုံခြုံတာလဲဆိုတော့... Firefox အတွက် Firesheep ဆိုတဲ့ Add-on ဆိုတာရှိတယ်ဗျ... သူနဲ့ Social Website တော်တော်များများရဲ့ User Log in information တွေကို Wi-Fi network တွေကနေခိုးကြည့်နိုင်တယ်ဗျ... hijack လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီတော့ဗျာ... ဒီရန်က ကာကွယ်ဖို့ရာ ForceTLS ကို
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12714/ ကနေ သွားယူပါ...
Install လုပ်ပါ။ Mozilla Firefox ကို Restart လုပ်ပါ။
Mozilla Firefox ရဲ့ Tools>ForceTLS Configuration ကိုသွားပါ။
ForceTLS Settings Windows ပေါ်လာပါမယ်။
Address of web site: box မှာ https: နဲ့ လည်း အလုပ်လုပ်တဲ့ Website ကို ထည့်ပြီး Add Site ဆိုတာကို နှိပ်နှိပ်ပြီးထည့်သွားလို့ရတယ်...
Subdomain တွေကိုပါ https: နဲ့သုံးချင်ရင် Force Subdomains Too ဆိုတဲ့ Check box ကို အမှန်ခြစ်ခဲ့ပေါ့
ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင် Remove Site or Remove All Sites ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့။ ပြီးရင် Close ပေါ့ဗျာ။
Firefox ၏ မပြုပြင်ရသေးသော အားနည်းချက်မှ တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေသည်ဟု Mozilla မှ သတိပေး
Firefox browser ကိုပြုလုပ်သည့် Mozilla သည် browser ၏မပြုပြင်ရသေးသည့် အားနည်းချက်ကိုအသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
Software တွေထုတ်လုပ်ရေးသားပြီဆိုရင် ရေးနေစဉ်ကတည်းက Module လေးတွေကို Test လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်။
Unit Testing (or) Module Testing လို့ခေါ်ပါတယ်။ Software Development တခုရဲ့ ပထမဆုံး Test လုပ်တဲ့ အပိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီတော့ Module လေးတွေကို Test လုပ်တဲ့နည်းတွေထဲက White Box Test ဆိုတာ ကို နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီလိုဗျ White Box Test ဆိုတာ Program Module တခုရဲ့ Control နဲ့ Flow ကို Focus လုပ်ပြီး Internal Structure ရယ် Logic ရယ် ကို စစ်ဆေးတာပါပဲ။
ဘယ်လိုစစ်တာလဲဆိုတော့ Method နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ…
Statement coverage method နဲ့ Condition coverage method ဆိုပြီး ပုံစံ နှစ်မျိုးနဲ့ Test လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့တွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ Module တွေကို Test လုပ်တာလဲဆိုတာကို ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ။ ကြည့်ကြည့်ပါ…
ဒါက Software Development မှာ တကယ့်ကို အခြေခံလေးပါ… မသိသေးသူတွေ ဗဟုသုတ ရစေဖို့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Brainstorming ဆိုတာ Brain ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Storm ဆိုတဲ့စကားလုံး
နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ ဝေါဟာရတခုပါ။
Brainstorming ဆိုတာ ပြဿနာတခုအတွက် ဖြေရှင်းနည်းတခုရလာဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့
စည်းမျဉ်းတွေထဲမှာပဲ လူတွေအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး တယောက်ချင်းစီရဲ့
အတွေးအခေါ်အကြံဉာဏ် တွေကို ဖော်ထုတ်ရှာဖြွေကတာကို ခေါ်တာပါ။
Brainstorming လုပ်မယ်ဆိုရင် တော့ Rule လေးတွေ ရှိတယ်ဗျ...
၁။ No Criticizing
တယောက်ယောက်ကပေးလာတဲ့ အကြံဉာဏ်၊ အတွေးအခေါ်ကို အပြစ်မရှာရပါဘူး။
အပြစ်ရှာခြင်းဟာ ဒီနေရာမှာတော့ အကြံဉာဏ် တွေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကို
၂။ Quantity Over Quality
Brainstorming လုပ်တဲ့နေရာမှာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အကြံဉာဏ်
အမြောက်အမြားကို ဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ အကြံဉာဏ်
အများကြီးထဲကနေ အကောင်းဆုံး ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကို ရနိုင်တယ်လေ။
၃။ No Constraints
Brainstorming လုပ်ပြီဆိုရင် ဘာကိုတော့
ကန့်သတ်ချက်မျိုး မရှိရပါဘူး။ ကန့်သတ်ချက်တွေ ဟာ အကြံဉာဏ်တွေ
၄။ Combine and piggyback
လိုအပ်လာရင် အကြံဉာဏ် နှစ်ခု ကိုပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်စေ၊ တယောက်ထဲက
ထွက်လာတဲ့ အကြံဉာဏ်ကို ထပ်ပေါင်းပြီး အကြံဉာဏ် အသစ် တခု
ထုတ်တာမျိုးလုပ်ရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တကယ် အသုံးတည့်တဲ့
အကြံဉာဏ် အသစ် တခု ရလာနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ဒါလေးတွေကတော့ Brainstorming လုပ်မယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် အခြေခံ
နောက်တခုရှိသေးတယ်ဗျ Brainstorming ကိုဘယ်နေရာမှာ လုပ်မှာလဲ။ ဘယ်သူတွေ
ပါဝင်သင့်လဲ... စတာတွေ လိုပါသေးတယ်။
- အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင် (၅) ယောက်က နေ (၈) ယောက် အထိ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့် အဖွဲ့ဝင် တိုင်းက တူညီတဲ့ ရာထူး
အဆင့်အတန်းရှိရပါမယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ခွင့် ရှိသူတြွေဖစ်ရပါမယ်။
- ဆွေးနွေးမယ့် အခန်းဟာ အဖွဲ့ဝင် အား လုံး အတွက် ကိုယ်၊စိတ် သက်တောင့်
သက်သာ ရှိနိုင်တဲ့ Conference Room လို အခန်းမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။
- အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်မယ့်သူ ဟာ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေးဆေး
သက်သာ ရှိပြီး လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေ တခု ရရှိနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင် တခု
- ဆွေးနွေးတဲ့ အချိန်က (၁) နာရီ ကျော်လာပြီဆိုရင် ခဏ တော့ အနားပေးရပါမယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ Brainstorming တခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်
Brainstorming Method ကို အခြေခံထားတဲ့ Gordon Method , KJ Method
တို့လည်း ပြဿနာတခုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေ အနေနဲ့ရှိပါသေးတယ်။
Organization တခုမှာ Brainstorming ဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
နည်းပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ Company လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။
Sony Ericsson PlayStation Phone ကို Hard Reset လုပ်နည်း
Reset လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ Phone ထဲက Data တွေပျက်မှာပါ... ဒီတော့ အရင်ဆုံး
Back up လုပ်ဖို့ မှာချင်ပါတယ်။
အောက်က နည်းကတော့ Main Home Screen ကနေ Factory Reset လုပ်နည်းပါ။
၁။ Main Home Screen ကနေ Menu ကို ရွေးပါ။
၂။ Settings ကိုရွေးပါ။ Privacy ကိုရွေးပါ။
၃။ Factory Data Reset ကို ရွေးပါ။
၄။ Reset Phone ကိုရွေးပါ။
၅။ Password တောင်းလာရင် ထည့်ပေးပါ။ Erase Everything ကိုရွေးပါ။
ဒါဆို Factory Reset လုပ်ပြီးပါပြီ။
Phone က Respond လုံးဝ မလုပ်နိုင်တော့ပဲ Frozen ဖြစ်နေပြီဆိုရင် Key
combination ကို သုံးပြီး Hard Reset လုပ်ရတော့မယ်လေ...
၁။ ဖုန်းကို Power အရင်ပိတ်ပါ။ Power ပိတ်လို့တောင်မှ မရတော့ဘူးဆိုရင်
Battery သာဆွဲဖြုတ်လိုက်တော့ပေါ့။ ပြီးရင် ၅ စက္ကန့်လောက်စောင့် Battery
၂။ LCD ရဲ့ အောက်နား က Left , Right ခလုတ်နှစ်ခုကို ဖိနှိပ်ထားပါ။
၃။ Power ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါ။
၄။ LCD Screen မှာ Hard Reset လုပ်နည်းတွေကို
Factory Reset လုပ်ငန်းပြီးရင် ဖုန်းက Reboot လုပ်ပါလိမ့်မယ်... Power
ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဖုန်း က စက်ရုံက ထုတ်လိုက်တုန်းက ပုံစံ
အရင် install လုပ်ထားတဲ့ application တွေနဲ့ Data တွေကို ဖုန်းထဲကို
ကဲ ... ကျေနပ်နိုင်ပါစေဗျာ...
Motorola Droid R2-D2 ကို Hard Reset လုပ်နည်း အဆင့်များ
ဒီတခါတော့ Motorola Droid R2-D2 ကို Hard Reset လုပ်ပုံလုပ်နည်း
ပထမဆုံး reset မလုပ်ခင် ပြောချင်တာကတော့...
Reset လုပ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ရှိသမျှ Data တွေကို အကုန်ဖျက်ပစ်မှာ
ဒီတော့ Data တွေကို Backup လုပ်ထားဖို့ ပြောချင်ပါတယ်...
ကဲ လာပါပြီ.. ပထမဆုံး Factory Data Reset ကို Menu Settings ကနေ လုပ်ပုံ
၁။ Main Home Screen ကနေ Menu ကို Select လုပ်ပါ
၂။ Settings ကို Select လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Privacy ဆိုတာကို Select လုပ်ပါ
၃။ Factory data reset ကို Select လုပ်ပါ
၄။ Reset phone ကို Select လုပ်ပါ
၅။ Password မေးလာပါမယ်... ရိုက် ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Erase
everything ကို Select လုပ်ပါ။
ဒါဆို Main Home Screen Settings ကနေ Factory reset လုပ်နည်း ပြီးပြီပေါ့ဗျာ...
နောက်တနည်းက ဖုန်းက ဘာဆိုဘာမှ Respond မလုပ်တော့ပဲ Frozen
Hard reset လုပ်ဖို့လိုပြီပေါ့ဗျာ
၁။ Power ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Power Off ဆိုတာကို Select လုပ်ပါ
၂။ Keyboard ပေါ်က X Key ကို နှိပ်ထားပြီး Power ပြန် on လာတဲ့အထိ
စောင့်ပါ။ Screen ပေါ်မှာ အဝါရောင် တြိဂံပုံ လေး ပေါ်လာတဲ့ အထိ X Key ကို
၃။ Slied ကို ပိတ် လိုက် ပြီး Volume Up ခလုတ် ကို နှိပ်ထားပါ။ ပြီးရင်
Camera ခလုတ် ကို Volume Up ခလုတ် နဲ့ အတူ တပြိုင် တည်း အတူတကွ နှိပ်
၄။ Screen ပေါ်မှာ "wipe data/factory reset" ဆို ပြီး ရွေးချယ်စရာ
ပေါ်လာပါမယ်။ Keyboard ပေါ်က Direction Pad ကို သုံးပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ
၅။ Direction Pad ကို သုံး ပြီး Yes ကို ရောက်တဲ့ ထိ Screen Menu ကို
ဆွဲချလာပါ။ ပြီးရင် d-pad select key ကို သုံး၍ "Yes" ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် ဖုန်းက ရှိသမျှ Data ကို ဖျက်ပါပြီ... ပြီးပြီဆိုရင် သူ့
အလိုလို Reboot လုပ်ပါလိမ့်မယ်. စက္ကန့်အနည်းငယ် ကြာတာနဲ့
ဖုန်း Power ပြန် on လာပါမယ်... ဒီတခါတော့ ဖုန်းက စက်ရုံက
ထုတ်လိုက်တုန်းက ပုံစံ အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ...
ဒီတော့ကာ... ဖုန်းထဲကို အရင် က သွင်းထားတဲ့ Third-party applications
software တွေကို ပါ ပြန် install လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်...
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အားလုံး ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အောက်မှာ ရေးပြထားတာကတော့. Samsung Mesmerize ကို factory defaut အတိုင်း ဖြစ်အောင် Reset လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပါပဲ...
Reset လုပ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ရှိသမျှ Data တွေကို အကုန်ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ကဲ လာပါပြီ.. Main Home Screen Settings ကနေ Factory Reset လုပ်ပုံက ဒီလိုဗျ
၅။ Password မေးလာပါမယ်... ရိုက် ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Erase everything ကို Select လုပ်ပါ။
နောက်တနည်းက ဖုန်းက ဘာဆိုဘာမှ Respond မလုပ်တော့ပဲ Frozen ဖြစ်နေပြီဆိုပါတော့ဗျာ....
၁။ ဖုန်း ကို Power အရင် ပိတ်လိုက်ပါ
၂။ အပေါ်က ပြောသလို Frozen ဖြစ်နေရင်တော့ Battery ကိုသာ ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ။ ၅ စက္ကန့်လောက်စောင့်ပါ Battery ပြန်တပ်ပါ
၃။ Volume Down ခလုတ်ကိုနှိပ် ထားပါ
၄။ Power ခလုတ်ကို ဖုန်း Power on လာတဲ့အထိ ဖိနှိပ် ပေးထားပါ
၅။ Fastbook, Recovery, Clear Storage , Simlock ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာ Menu ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
၆။ Clear Storage ဆိုတာကို Volume Down ခလုတ်လေး နှိပ် ပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ
၇။ Power ခလုတ်ကို နှိပ် ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါ
၈။ ပြီးရင် Yes အတွက် Volume Up ခလုတ်, No အတွက် Volume Down ခလုတ် ကို နှိပ် ပါ
ဒါဆိုရင် ဖုန်းက ရှိသမျှ Data ကို ဖျက်ပါပြီ... ပြီးပြီဆိုရင် သူ့ အလိုလို Reboot လုပ်ပါလိမ့်မယ်. စက္ကန့်အနည်းငယ် ကြာတာနဲ့
ဖုန်း Power ပြန် on လာပါမယ်... ဒီတခါတော့ ဖုန်းက စက်ရုံက ထုတ်လိုက်တုန်းက ပုံစံ အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ...
ဒီတော့ကာ... ဖုန်းထဲကို အရင် က သွင်းထားတဲ့ Third-party applications software တွေကို ပါ ပြန် install လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်...